ဥရောပမှာတော့အဆိုပါအများစုမှာ Instagrammable နေရာများဘာတွေလဲ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > ဥရောပမှာတော့အဆိုပါအများစုမှာ Instagrammable နေရာများဘာတွေလဲ
မီးရထားနဲ့ခရီးသွားကြဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါသည် အသစ်တစ်ခုကိုတိုင်းပြည်ရှာဖွေတွေ့ရှိ - သင့်ရထားအတွက်လျှော့ပေါ့, ယင်းစောင့်ကြည့် တောတောင်ရှုခင်း အားဖြင့်ပေါ်လှိမ့်. သူတို့ကအစဥရောပမှာအများဆုံး Instagrammable သောအရပ်တို့ကိုမရောက်ရှိဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းပါပဲ!
ဒါကြောင့်ခရီးမှကြွလာသည့်အခါ, သင့်ရဲ့ ဖုန်းကို သငျသညျများမှာနေရာတိုင်းအများဆုံးဆက်ဆက်ဖြစ်ပါသည် – ဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုယူပြီးထံမှ filter များနှင့်စာတန်းများကိုများများနှင့်အတူကစားရန်. သင့်ရဲ့ခရီးသွားမှတ်တမ်းတင်, သင့်ရဲ့အားလပ်ရက်, မြို့ကြီးများသင့်ရဲ့အံ့သြဖွယ်အမှတ်တရများကိုင်ဖို့အလွန်ကြီးစွာသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်, နိုင်ငံပေါင်း, နှင့်မှသင်၏လမ်းအောင် ခရီးစဉ်. သင်တို့သည်ဤအမှတ်တရများကယ်တင်နှင့်အနာဂတ်၌သူတို့အပေါ်မှာပြန်ကြည့်နိုင်ပါတယ်မသာ, သင်မူကားကိုလည်းသင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်အတူဤအအချိန်လေးဝေမျှဖို့ Instagram ကိုအသုံးပွုနိုငျ.
ဒါပေမဲ့, ဥရောပတိုက်တွင်အများဆုံး Instagrammable သောအရပ်တို့ကိုအဘယ်မှာရှိကြသနည်း? ကနေ Cady Heron ၏နေိုငျသောစကားများအတွက် mean မိန်းကလေးများ, အခါ Instagrammable အခွင့်အလမ်းများအရေအတွက်ကမှကြွလာ, ကန့်သတ်မတည်ရှိပါဘူး.
ဥရောပတိုက်တွင်အများဆုံး Instagrammable သောနေရာများ: အဆိုပါဗင်းနစ် Simplon-Orient-Express ကို: လန်ဒန် - ဗင်းနစ်
ကျနော်တို့ကဒီမှာတဦးတည်းသောကျောက်များနှင့်ငှက်နှစ်ကောင်သတ်ဖြတ်နေ. ဤသည်ကိုမသာတစ်ခုဖြစ်တယ် အကျော်ကြားဆုံးရထားန်ဆောင်မှု ကမ်ဘာပျေါတှငျဒါပေမယ့်လည်းဥရောပမှာအများဆုံး Instagrammable သောနေရာများဖြစ်ပါသည်. အနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားသောလမ်းကြောင်းများရှိပါသည်နေချိန်မှာသင်ယူနိုင်ပါသည်, လူကြိုက်အများဆုံးကတော့ဖြစ်ပါတယ် လန်ဒန် ဗင်းနစ်ခရီးမှ. သင်တို့ရထားရရှိပါသည်ပြီးတာနဲ့ ဗင်းနစ်, ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်တစ်ဦးကရထား၏အကူအညီနှင့်အတူ, သင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုများအဆုံးမဲ့များမှာ!
RIALTO တံတား BRIDGE (RIALTO တံတား BRIDGE)
The Rialto Bridge is one of only four bridges crossing the Venetian Grand Canal, အရာကပေါ်ကလူမပါဘဲဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ရန်အလွန်ခက်ခဲမယ့်ဆိုလိုတယ်. တဦးတည်း option ကို - ဤအရာအလုံးစုံတည်နေရာနှင့်ဝသကဲ့သို့ - အလွန်နံနက်စောစောသွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့ဖြစ်ပါတယ်.
ငါမည်သူမဆိုအဆိုပါရန်းတူးမြောင်း၏ဓာတ်ပုံရတဲ့မပါဘဲမြို့အရွက်သံသယ. ဒါဟာဗင်းနစ်ကိုဖွင့်, ကောင်းစွာ, ဗင်းနစ်! ဒါကြောင့်အကောင်းဆုံးအမြင်များတစ်ခုမှာ Rialto တံတားထိပ်ကနေ.
ဥရောပတိုက်တွင်အများဆုံး Instagrammable သောနေရာများ: အဆိုပါ Bernina Express ကို: ဆွစ်ဇာလန် - အီတလီ
အတွက် Chur အကြားခရီးသွားလာ ဆွစ်ဇာလန် နှင့် Tirano အတွက် အီတလီ, အဆိုပါ 122km ခရီးဟာရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ဆွစ်ဇာလန်အားဖြင့်သင်တို့ကြာ အဲလ်ပ်တောင်တန်း. Instagram ကိုအဘို့အပြီးပြည့်စုံသော!
သငျသညျဆွစ်ဇာလန်ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်ပြီးတာနဲ့, ဒီမှာအများဆုံး Instagrammable နေရာများ:
ဤတောင်ပေါ်အကျွမ်းတဝင်ကြည့်ရှုပါသလား? သငျသညျအစဉျအမွဲတဲ့ Toblerone ဘားကိုစားပြီးပြီဆိုပါက, ဒါကြောင့်ဖြစ်ကောင်းင်! ဒါဟာင် တောင် ၎င်းသည်ထုပ်ပိုးခြင်းတွင်ပါ ၀ င်ပြီး၎င်းသည်ဥရောပရှိ Instagram Instagram တွင်အများဆုံးသောနေရာများစာရင်း၌အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်သည်.
အောက်ကအတူတူရိုက်ချက်ရဖို့, Zermatt ကနေထိပ်အားလုံးကိုလမ်း Gornergrat ရထားယူ, ထို့နောက် Lookout Point အထိလမ်းလျှောက် (ဟိုတယ်အတိတ်).
အဖျား: Zermatt အတွက်စူပါမားကက်ကိုမကြာခဏဒီအတိအကျရိုက်ချက်များအတွက် Toblerone အရက်ဆိုင်ထဲက run! သင်ဤရိုက်ချက်ချင်နှင့်သင့်အခွင့်အလမ်းတွေကိုယူချင်ကြပါဘူးလျှင် သို့ဖြစ်. သင်သည် Zermatt ရမတိုင်မီသေချာသင်ကမဝယ်စေ.
သငျသညျစွန့်စားမှုဒီမှာဆိုရင် (တနည်း. လေထီးစီးခြင်း) သငျသညျအခြို့သောမော်ကွန်း Instagram ကိုရိုက်ချက်များကိုရယူရန်လိမ့်မည်ထို့နောက်မျှသံသယ. သင့်ရဲ့သွေးပေါင်ချိန်မြင့်တက်တူခံစားမနေပါနဲ့? သငျသညျခက်ခဲ Kulm ရဲ့ထိပ်ကနေတစ်ဦးအေးမြရိုက်ချက်ရနိုင်. သငျသညျ Interlaken နှင့်ဆွစ်ဇာလန်အဲလ်ပ်တောင်တန်း၏မြို့ကိုကျော်တစ်ဦးမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အမြင်အရလိမ့်မယ်.
ဥရောပတိုက်တွင်အများဆုံး Instagrammable သောနေရာများ: အဆိုပါ Brocken မီးရထား. Harz တောင်တန်း Range, ဂျာမနီ
ဒီအထူးသဖြင့်လမ်းကြောင်းတွင်, သင် 1,142m မြင့် Brocken တက်ပါလိမ့်မယ်, မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့အမြင့်ဆုံးအထွတ်အထိပ် ဂျာမနီ, ခံစား မြင်ကွင်းကျယ်အမြင်များ ပတျဝနျးကငျြရှုခင်း၏. ဒါပေမဲ့, သင်သာတောင်တက်နဲ့တူဖို့ Harz တောင်တန်းသွားရောက်ကြည့်ရှုရန်မလိုပါ. တကယ်တော့, သငျသညျရေးတဲ့နတ်သမီးပုံပြင်နှင့်အတူကစားစရာမြို့များကိုကြိုက်လျှင်ပိုကောင်းမယ့် ရဲတိုက်, ယူနက်စကိုကမ္ဘာ့ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်ဆိုဒ်များ, ရဲတိုက်, နှင့်ဘုန်းကြီးကျောင်းများ အလယ်ခေတ်ကနေ, သို့မဟုတ်မြင်နေ သူတို့ရဲ့သဘာဝအလျောက်နေရင်းဒေသများရှိရိုင်းတိရိစ္ဆာန်များ. သင့်ရဲ့ Instagram ကိုအစာကျွေးခြင်းအဘို့အပြီးပြည့်စုံသော!
Leipzig Wernigerode Brocken မှရထား
Wernigerode Brocken ရထားမှ Hanover
မြူးနစ် Wernigerode Brocken မှရထား
ဘာလင် Wernigerode Brocken မှရထား
အလည်အပတ် Collegiate ဘုရားကျောင်း, ရဲတိုက်, နှင့် Quedlinburg ၏ဟောငျးမြို့
Grunderzeit နှင့်အနုပညာ Nouveau Villas များ၏ပေါင်းစပ်နှင့်အတူ, Quedlinburg ၏ဟောငျးမြို့ကဥရောပတိုက်တွင်အများဆုံး Instagrammable သောနေရာများထဲကတစ်ခုစေသည်. ဒါဟာစည်းရုံးသိမ်းသွင်းသောကျွန်းသစ်-ရှုမြင်သုံးသပ်ကြအဆောက်အဦး၏နံပါတ်နှင့်အရည်အသွေးမြင့်မားင် ယူနက်စကို Quedlinburg တစ်ဦးအလယ်ခေတ်ဥရောပမြို့တစ်ခုခြွင်းချက်ဥပမာကြေညာရန်.
Leipzig Quedlinburg မှရထား
Quedlinburg ရထားမှ Hanover
မြူးနစ် Quedlinburg မှရထား
ဘာလင် Quedlinburg မှရထား
အနောက်နိုင်ငံတွေအဘိဓါန် Highland လိုင်း: စကော့တလန်
အနောက်နိုင်ငံတွေအဘိဓါန် Highland လိုင်းတစ်လျှောက်ခရီးသွားလာ, အဆိုပါ Jacobite ရေနွေးငွေ့ရထားဖြစ်ကောင်းကကစားအခန်းကဏ္ဍများအတွက်အကောင်းဆုံးလူသိများသည် ဟယ်ရီပေါ်တာရုပ်ရှင်တွေ - ထို Hogwarts Express ကိုအဖြစ်. ရထားအနောက်နိုင်ငံတွေအဘိဓါန် Highland မီးရထားလိုင်းပေါ် Mallaig ကနေဝိန်း Fort ဝီလျံခွဲထုတ်သည့် 84 မိုင်လမ်းပိုင်းပြေး. ဒါဟာမကြာခဏကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးမြတ်ဆုံးရထားလမ်းခရီးတဦးဟုအမည်ပေးထားသည့်င့်, နှင့်ကွက်တိဒါ!
သင်ကိုယ်တိုင်ရယူရန်နိုင်သည့် pics အချို့ကိုကြည့်ဖူး!
ဥရောပတိုက်တွင်အများဆုံး instagrammable သောနေရာများ: အဆိုပါအဝါရောင်ရထား, ပြင်သစ်
ဟုတ်ကဲ့ '' ပြောပါ’ ဒီခရီးစဉ်မှ! ထက်ပိုမိုရာစုနှစ်များအတွက်, ဒီမီတာ-gauge အဝါရောင်ရထား Latour-de-ကာရယ်လ်မှ Villefranche-de-Conflent ကနေပြင်သစ်နီဇ်မှတဆင့်၎င်း၏လမ်းအကွေ့အကောက်များသောထားပြီး. ကအကွာအဝေးအတွင်းကင်းမဲ့ဘယ်အရာကို - ကသာ 63km နှင့် ပတ်သက်. သုံးနာရီကြာမြင့်စွာဖွင့် - ကထက်ပိုမိုလုံးဝ Instagrammable အမြင်များတက်စေသည်. အဆိုပါ Parc Naturel ဒေသဆိုင်ရာ des နီဇ် Catalan ၏သိသာထင်ရှားသောတောင်များသူတို့ထဲကတဦးတည်းဖြစ်ခြင်း!
ဒါဟာအစပြင်သစ်ရဲ့အမြင့်ဆုံးမီးရထားဘူတာရုံမှာရပ်, Bolquere-Eyne. ဘယ်ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် 1592m မှာထိုင်, နှင့်ပိုတငျး Gisclard ဖြတ်သန်းသွားသည်, မီးရထားရပ်ဆိုင်းမှုတံတား.
ရထား Toulouse မှမာဆေး
ကြောင်းဖုန်းကိုအားသွင်းနှင့်သင့် Instagram ကို app ကို update လုပ်. ဒါဟာ၏အကူအညီနှင့်အတူလက်မှတ်ဘွတ်ကင်ဖို့အချိန်င် ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန် ATrain နှင့်ကိုရယူရန်ရ!
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. ရုံနိုင်ပါတယ်ဖြစ်စေ ဤ blog post မှ link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးပေး, သို့မဟုတ်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmost-instagrammable-spots-europe%2F%3Flang%3Dmy- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
#facebook ကို #Mostinstagrammablespots europetrains europetravel Instagram ကို